Nagu saabsan - Haining Chengda Makiinado Co., Ltd.
Asa Paper Cup Qalabka Warshadaha Leading Brand
Haining Chengda Makiinado Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1998. 20-kii sano ee la soo dhaafay, Chengda waa soo saare ku takhasusay soo saarida qalabka koobka waraaqaha. Kala duwanaanta wax soo saarka Our daboolayaa koob warqad otomaatig ah, baaquli, daboolka iyo mashiinada toosan la xirrira iyo mashiinada kormeerka.
Iyada oo leh waaxdeeda R & D, Chengda waxay leedahay tiknoolajiyad hoggaamineed oo ku saabsan mashiinnada wax soo saarka waraaqaha. Hagaajinta joogtada ah, fikradaha cusub iyo qalabka casriga ah ee casriga ah ee u horseeda mashiinada Chengda tayada adduunka oo idil. Qaybta R & D ee Xirfadlaha ah, kooxda iibka iyo kooxda iibka kadib, waxay bixiyaan adeeg dhan nidaamka ah.
Iyada oo ku saleysan waayo-aragnimadii 20-kii sano ee la soo dhaafay, Chengda si fiican looma yaqaan Shiinaha oo keliya, laakiin sidoo kale adduunka oo dhan. Mashiinadeenu waxay u dhoofiyeen USA, EU, Japan, bariga dhexe iyo Afrika, in ka badan 100 dal.
Waxaan ku adkeyneynaa
Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin tayo wanaagsan iyo sumcad si aan u sii deyno xafiisyo fara badan iyo kuwa wax ku qaybiya meel ka baxsan Shiinaha